Fanomezana fahafaham-po ny mpanjifa Hohatsaraina tsenan’i Besarety
Mpivarotra Arts Malagasy - Digy Mangataka ny hanaovana baorina sy titra ny tanin’izy ireo
Efa 23 taona izao no nampiasan’ireo mpivarotra Arts Malagasy eny amin’ny lalana digy ho any Ambohitrimanjaka (FIMPIA) iny toerana iny nefa mbola misoratra amin’izy ireo ihany ny tany.
Foara iraisam-pirenena momba ny fambolena Fahombiazana tanteraka, tsy tara ny Airtel
Nifarana omaly alahady 15 septambra rehefa naharitra efatra andro ilay foara iraisam-pirenena momba ny fambolena andiany fahatelo notanterahina teny amin’ny Forello Expo Tanjombato.
Tonga nidina nijery ny zava-misy tetsy amin’ny tsenan’i Besarety Boriborintany fahatelo ny delegen’ny Boriborintany fahatelo Hery Razafintsalama sy ireo mpiara-miasa aminy, ny faran’ny herinandro teo.
Fanatsarana ny tsena no anton’ny fidinana na dia teo aza ireo ezaka maro efa nataon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra tamin’ny fanavaozana. Nisy ny dinika sy ny soso-kevitra niarahana tamin’ireo mpivarotra ao amin’ny “Etale” rehetra sy ny kaominina, ny delegen’ny boriborintany, ny ekipa teknika, ny lehiben’ny tsena ary ny delegen’ny mpivarotra. Tapaka tamin’izany fa hamboarina ny elanelan’ny « Etale » handehanan’ny mpividy, izay hita fa tena be fotaka ka hovaina « dallage ». Eo koa ny fanatsarana ny tafo izay mandena ireo mpividy rehefa avy ny orana . Hisy ny fifanarahana eo amin’ny kaominina sy ny mpivarotra amin’ny fanatsarana. Nisy koa ny fivoriana niarahana tamin’ireo ekipa mpanao Rugby SCB na Sport Club de Besarety, amin’ny fanovana ny tokotany malalaky ny tsena hanjary ho rarivato raha mbola tanibe teo aloha.